အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ ငြိမ်ချမ်းရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး တိုးတက်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
အထူးရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့က မြန်မာသံတော်ဆင့် အယ်ဒီတာအဖွဲ့ကို စစ်မေး
မန္တလေး(စ.ရ.ဖ)မှ မန္တလေးမြို့လယ်ခေါင် တည်းခိုခန်းတစ်ခုတွင် လက်နက်ငယ်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့
မြန်မာနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံက လွတ်မြောက်ရန် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဒုသမ္မတပြော
"ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား?" (ရုပ်/သံ)
စားကျက် ရှားပါးလာခြင်းကြောင့် နွားနောက်မွေးမြူရေး ခက်ခဲလာ
လက်ပြတ်သွားသည့် အလုပ်သမား၂ဦးနစ်နာကြေး ဘတ်ငါးသိန်းကျော်ရရှိ
သျှမ်း/မြောက် မူစယ်တွင် နမ့်ပေါ့ချောင်း ရေကြီး လူ ၅ ဦးထက်မနည်း ပျောက်ဆုံး
မြန်မာ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဗဟို ချူပ်ကိုင်မူ လျှောချ ရန်နှင့် ခေတ်မီ လက်နက်များ တပ်ဆင်ရေး ရခိုင် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် တင်ပြ ဆွေးနွေး
ရန်ကင်းလူသတ်မှု တရားခံက ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ကျူးလွန်သည်မှာ ထင်ရှား၍ေ သဒဏ်ချမှတ်
စက္ကူစက်ရုံ အလုပ်သမားတစ်ဦး သန့်ရှင်းလုပ်ရာမှ ဓါတ်လိုက်သေဆုံး
လေပြင်းတိုက်၍ မဟာဓာတ်အားတိုင်များ လဲပြို
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအချို့ ရေကြီးရေလျှံဖြစ်ပွား
တောင်ကိုရီးယားတွင် ခရီးသည်တင် ရထား ၂ စီး တိုက်
မလေးရှား လေယာဉ်က သေဆုံးသူ အလောင်းတွေကို စတင်စစ်ဆေးနေ
မိုးကြီးပြီးမြေပြိုမှုကြောင့် ကချင်ဒုက္ခသည် ၅ ဦးသေဆုံး
သီလဝါဒေသခံတွေရဲ့ အခက်အခဲ JICA အစီရင်ခံစာ ထုတ်မယ်
ဟားမားစ် အစ္စရေး အရေး အဖြေပေါ်အောင် ဆွေးနွေး
ဂါဇာတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေရိကန်လေယာဉ်တွေ Tel Aviv ကို ပျံသန်းခွင့်ပိတ်
အာဟာရ ထမင်းကျွေးရာမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁၀၀ ကျော် အစာအဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပွား
HIV ပိုးကို သေစေနိုင်တဲ့ ကွန်ဒုံး စတင် ရောင်းချ သင့်မသင့် သုံးသပ်နေကြ
Posted: 23 Jul 2014 04:51 AM PDT
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အရပ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၏ အခန်းကဏ္ဍဆွေးနွေးပွဲကို ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့၊ နာနတ်တောရပ်ကွက် ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတိုက် ဓမ္မာရုံတွင် ဇူလိုင်လ ၂၁ရက်နေ့မှ ၂၃ရက်ထိကျင်းပပြုလုပ်သွားသည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ကရင်နီပြည်နယ် လူငယ်များ သမဂ္ဂအဖွဲ့တွင် တာဝန်ယူနေသော ကိုကျော်ထင်အောင်က “ ကျတော်တို့ဒေသရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်
Posted: 23 Jul 2014 04:45 AM PDT
မြန်မာသံတော်ဆင့် ဂျာနယ်က အယ်ဒီတာချုပ်နဲ့ တာဝန်ခံ အယ်ဒီတာတွေကို အထူးရဲသတင်း တပ်ဖွဲ့က ဒီနေ့ ခေါ်ယူစစ်မေးပါတယ်။ အယ်ဒီတာချုပ် ဦးကျော်စွာဝင်းကို အောင်သပြေ ရဲရိပ်သာမှာ ခေါ်ယူစကားပြောတယ်လို့ အတူလိုက်ပါသွားတဲ့ သံတော်ဆင့် သတင်းဌာနက အယ်ဒီတာ ဦးအောင်ကိုကိုက ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ အယ်ဒီတာချုပ်ကို မေးတာကတော့ အများကြီးပေါ့ဗျာ။ ကျနော်က ပြောနိုင်တာက အဓိကတော့ ဂျာနယ် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ ဘယ်ငွေကြေးနဲ့ လှုပ်ရှားသလဲ
Posted: 23 Jul 2014 04:39 AM PDT
ဇူလိုင် -၂၃ ။ မန္တလေးမြို့လယ်ခေါင် ၈၂လမ်း၊ ၂၆-၂၇ လမ်းမှ တည်းခိုးခန်း တစ်ခုတွင် ယနေ့ ၁၂ နာရီကျော်ခန့်က စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တူးပူးပေါင်း၍ သတင်းကွင်းဆက်များဖြင့် လက်နက်နှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးများကို ဖေါ် ထုတ် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖမ်းဆီးရမိရာတွင် ကနဦးသတင်းများအရ မူးယစ်ဆေးဝါး အပြားပေါင်း ရာဂဏန်းဖြစ်ပြီး ပစ္စတိုကဲ့သို့ လက်နက်ငယ် တစ်ခု ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့သဖြင့်
Posted: 23 Jul 2014 04:33 AM PDT
ဇူလိုင် ၂၃ ။ သစ်သီးဝလံများ စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သူ များသည် ဓါတုဆေးဝါးများ စနစ်တကျ သုံးစွဲခြင်း မရှိပါက ယင်းတို့၏ ကျန်းမာရေးသာ မက အသက်အန္တရာယ်ထိ ဒုက္ခဖြစ်စေ နိုင်ကြောင်းကို မြန်မာနှို်င်ငံ သစ်သီးဝလံနှင့် ပန်မာန် များ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူများ ကော်မတီဝင် ဒေါ်သန်းသန်းဆွေကပြောသည်။ "သစ်သီးဝလံတွေ စိုက်ပျိုးတဲ့ အခါ ပိုးသတ်ဆေးနဲ့ မှိုသတ်ဆေးတွေ သုံးတဲ့နေရာမှာ လိုတာထက်ပိုပြီး သုံးတာ မျိုးတွေရှိတော့
Posted: 23 Jul 2014 04:20 AM PDT
မြန်မာနိုင်ငံ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်ကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အချိန်ဇယား ရေးဆွဲပြီး အစိုးရ၊ သာမက ပုဂ္ဂလိက ပြည်သူ၊ အစိုးရမဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အားလုံးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ ဒုသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး နိုင်ငံအဖြစ်မှ လွတ်မြောက်ရေး အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးမှာ ဒီကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်၊ ဒုသမ္မတလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးဉာဏ်ထွန်းကြေ
Posted: 23 Jul 2014 02:32 AM PDT
"ပြောပြရင် ဒေါပွမှာလား?" အရိုင်းနှင့် နေဇော်နိုင် တင်ဆက်သည် ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၄ / DVB TV News
Posted: 23 Jul 2014 02:21 AM PDT
ကလေး ဇူလိုင် ၂၂ ချင်းပြည်နယ်သည် နွားနောက်မွေးမြူခြင်း လုပ်ငန်းကို အများဆုံး လုပ်ကိုင်သည့် ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများမှာ အမြဲစိမ်းတောများကို ခုတ်ထွင် ရှင်းလင်း၍ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာစနစ်ကို ကျင့်သုံးကြခြင်း၊ ရေစီးရေလာကောင်း သည့် နေရာများနှင့် သဘာဝဆားတွင်းများကို လူတို့က ကျူးကျော် အသုံးပြုကြခြင်း စသည့်အခြေအနေများကြောင့် နွားနောက်များအတွက် စားကျက်ခင်းများ တိမ်ကော ပပျောက်လာကာ နွားေ
Posted: 23 Jul 2014 02:22 AM PDT
၂၀၁၄ ဇူလိုင်လ ၂၂ ဘန်ကောက်မြို့ပချာအူထစ် ၇၅ လမ်းတွင်ရှိသော METTIC မော်တော် ဆိုင်ကယ်နှင့် ကား အပိုပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သည့် အလုပ်ရုံတွင် မတော်တဆ လက်သုံးချောင်း ပြတ်ခဲ့ရသည့် မြန်မာ အလုပ်သမား တစ်ဦး ယမန်နေ့က နစ်နာ ကြေးဘတ်နှစ်သိန်းကျော် ရရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိ ရသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့ ညနေ ၅နာရီခန့်က လက် သုံးချောင်းပြတ်သွားခဲ့သည့် ပဲခူးမြို့ ကြေးနီးကန် ရပ်ကွက်မှ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ်
Posted: 23 Jul 2014 02:02 AM PDT
ဂျူလိုင်လ ၂၃ ရက် ၂၀၁၄ သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း မူစယ်မြို့နယ် နမ့်ပေါ့ချောင်း ရေကြီးမှုတွင် လူ ၅ ဦး ထက်မနည်း ပျောက်ဆုံးနေ ကြောင်း သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း သတင်းရပ်ကွက်က ဆိုပါသည်။ ဂျူလိုင်လ ၂၀ ရက်ညတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းသဖြင့် မူစယ်မြို့နယ် နမ့်ပေါ့ချောင်းရေလျှံကာ ချောင်းတလျှောက် နေထိုင်သည့် ဒေသခံများ ရေဘေးသင့်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ “ညသန်းခေါင်မှာ ရေစတက်တော့ ဗမာအမျိုးသား ၂ ဦး ရေထဲမျောပါသွားတယ်
Posted: 23 Jul 2014 02:05 AM PDT
ဇူလိူင် (၁၆) ရက်နေ့က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် ဒုတိယ (၆)လပတ် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်မူ အစီရင်ခံစာအေပါ် လေ့လာတွေ့ရှိချက် အစီရင်ခံစာအား ဆွေးနွေးရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မူ လျှော့ချရန်နှင့် ခေတ်မီ လက်နက်များ ပြောင်းလဲတပ်ဆင်ရန်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ် ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခင်စောဝေက တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ “ ကျွန်မတို့ ဒီလ ၁၆
Posted: 23 Jul 2014 01:48 AM PDT
ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၂၂ ရန်ကင်းမြို့နယ် (၁၂)ရပ်ကွက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူသတ်မှုမှ တရားခံချစ်ပိုကို သေသူအား အသေ သတ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျူးလွန်ခဲ့သည်မှာထင်ရှားသဖြင့် သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ယမန်နေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီက တွဲဖက်ခရိုင် တရား သူကြီး (၄)က အပြီးသတ် အမိန့်ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ''တရားခံချစ်ပို ကန်ကျောက်လို့ နံရိုးကျိုး ဒဏ်ရာတွေ
Posted: 23 Jul 2014 01:38 AM PDT
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၂၃ ၂၂.၇.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၁၃၃၀ အချိန်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့မရဲစခန်းမှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံသို့ အမျိုးသားတစ်ဦး ဓါတ်လိုက် သေဆုံးရောက်ရှိ နေကြောင်း သတင်းအရ သွားရောက် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ သေဆုံးသူမှာ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်နေ ကောင်းထက်ဦး၊ (၁၉)နှစ်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ဖြစ်စဉ်အားစုံစမ်းရာ ၎င်းသည် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ် စက်မှုဇုန်ရှိ
Posted: 23 Jul 2014 01:32 AM PDT
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂၃ ၂၂.၇.၂၀၁၄ ရက်နေ့ ၂၁၀၀ အချိန်ခန့်တွင် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ ရွာသာကြီးကျေးရွာနေ ဦးသောင်းငွေသည် သားဖြစ်သူ သားကြီး(ခ)သန့်ဇင်ဦး၊ (၂၂)နှစ်မှာ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ လေးထောင့်ကန်ရပ်ကွက်၊ လေးထောင့်ကန်လမ်းနှင့် စံပြလမ်းဆုံအနီးတွင် ဓါးဖြင့်ထိုးခံရသဖြင့် သေဆုံးသွားပြီး သင်္ဃန်းကျွန်း စံပြဆေးရုံသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း ကြားသိရသဖြင့် သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ရာ သားဖြစ်သူတွင်
Posted: 23 Jul 2014 01:26 AM PDT
ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၂၂ ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းခရိုင် အမှတ်(၂) လမ်းမကြီး ရွာသာကြီးမှ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် တစ်လျှောက်တို့တွင် ဇူလိုင် ၂၁ ရက် နံနက် ဝဝး၂၅ နာရီခန့်က မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး လေပြင်းများတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ၆၆ KV ဓာတ်အားတိုင် ၆၉ တိုင်၊ ၃၃ KV ဓာတ်အားတိုင် နှစ်တိုင်နှင့် ၆ ဒသမ ၆KV ဓာတ်အားတိုင်နှစ်တိုင် စုစုပေါင်း ၇၃ တိုင် ကျိုးပဲ့လဲပြိုမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ''မိုးသည်းထန်စွာရွာပြီး
ရန်ကုန် ဇူလိုင် ၂၂ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီ မြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာအချို့တွင် ဇူလိုင်လ အတွင်းမိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းခဲ့ သောကြောင့် ရေကြီးရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပွားကာ စပါးပျိုးခင်းများရေနစ်မြုပ် နေကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါမြို့နယ်အတွင်းရှိ သာယာ ကုန်း၊ ညောင်ရွာ၊ ရေကျော်၊ ဘူတာစု၊ သဲကုန်း၊ လိပ္ပုပ်ကျေးရွာတို့တွင် စပါး စိုက်ပျိုးမြေဧက ၁ဝဝဝ ကျော်ရှိသည့် အနက် စပါးစိုက်ပျိုးခင်း ဧက ၆ဝဝ ကျော်မှာ နှ
Posted: 23 Jul 2014 01:21 AM PDT
ဦးတေဇပိုင် အာရှစိမ်းလမ်းမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(အေဂျီဒီ)ရဲ့ အစုရှယ်ယာ ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းထိ ၀ယ်ယူသွားဖို့ ရှိနေတယ်လို့ အာဏာရှင်ဟောင်း ဦးနေ၀င်းရဲ့မြေး ဦးကျော်နေ၀င်းက ဒီဗွီဘီကို ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ အများပိုင်ကုမ္ပဏီတခုဖြစ်တဲ့ အေဂျီဒီဘဏ်ရဲ့ ရှယ်ယာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ၀ယ်ယူထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ နောက်ထပ် ၆ လအတွင်းမှာ လက်ရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းအပြင် ၈၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ရှယ်ယာတွေ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ ခရီးသည်တင်ရထား ၂ စီး ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့က တိုက်မိလို့ လူ ၁ ဦး သေဆုံးပြီး ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေ ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ဆေးရုံအရာရှိ ၁ ဦးနဲ့ ရဲတွေက ပြောပါတယ်။ ဆိုးလ်မြို့တော်အရှေ့တောင်ဘက် ၁၂၅ မိုင်အကွာက အပန်းဖြေဒေသအတွင်း ပုံမှန် အဝေးပြေးမီးရထားနဲ့ ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသည်တင် ရထားတို့ တိုက်မိခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လူအယောက် ၇၀ ကျော် ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ပြောကြားပြီး သေဆုံးမှု
မလေးရှားလေယာဉ် ​MH ​17 ​ပျက်ကျမှုအတွင်း ​သေဆုံးသွားသူတွေရဲ့ ​အလောင်းကို ​ဟော်လန်နိုင်ငံကို ​ပို့ဆောင်ဖို့ ​သြစတြေးလျနဲ့ ​ဒတ်ခ်ျ ​အဖွဲ့တွေက ​ပြင်ဆင်မှုတွေ ​လုပ်နေကြပါတယ်။ လူသေ ​အလောင်းတွေ ​ဟာလည်း ​ထင်ထားသလောက် ​မများဘူးလို့ ​သိရပါတယ်။ ​သူပုန် ​တပ်ဖွဲ့တွေက ​ပြောဆိုထားတဲ့ ​အလောင်း ​ပေါင်း ​၁၀၀ ​လောက် ​ထက် ​လျော့ ​နည်း ​နေတာ ​တွေကို ​တွေ့ခဲ့ ​ရတာ ​ဖြစ် ​ပါတယ်။ အဲဒီ ​အလောင်း ​တွေဟာ ​လေယာဉ် ​ပျက်ကျတဲ့
Posted: 22 Jul 2014 07:24 PM PDT
ကချင်ပြည်နယ် လိုင်ဇာအနီးက လူဦးရေ ၈၀၀၀ကျော်နေထိုင်တဲ့ ဂျေယန့်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့က မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး စခန်းအနီး တောင်တခုကနေ မြေပြိုတာကြောင့် ဒုက္ခသည် ၅ ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအတွက် အိမ် ၁၀ လုံးခန့်ကို ဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းထားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေသတင်းထောက် မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ ပေ ၅၀ ခန့်ရှိတဲ့ တောင်တခုအနားက ဂျေယန့်ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာ
Posted: 22 Jul 2014 07:17 PM PDT
သီလဝါ စီးပွားရေး ဇုန်ကြောင့် အိုးအိမ် ရွှေ့ပြောင်း ခံခဲ့ရတဲ့ အိမ်ထောင်စု တွေ အတွက် အစိုးရနဲ့ JICA ဂျပန် နိုင်ငံ တကာ ကော်ပို ရေးရှင်း အေဂျင်စီ တို့ရဲ့ ထောက်ပံ့ ဆောင်ရွက်မှု တွေက ပြည့်စုံ လုံလောက်မှု မရှိတဲ့ အတွက် ရွာသား တွေက ဂျပန်နိုင်ငံ အထိ ကိုယ်စားလှယ် လွှတ်ပြီး တိုင်ကြား ခဲ့ကြရာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက JICA အဖွဲ့ရဲ့ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ လာရောက် စုံစမ်း မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။ အရင်က သီလဝါ ဒေသခံေ
Posted: 22 Jul 2014 07:10 PM PDT
အစ္စရေး၊ ပါလက်စတိုင်း အပစ်အခတ် ရပ်ဆဲရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည် ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အတွက် အီဂျစ်နိုင်ငံ ကိုင်ရိုမြိုနဲ့ အစ္စရေး တဲလ်အဗိမြို့တွေ မှာ ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန် နဲ့ အစ္စရေး တို့ ဆွေးနွေးကြ ပါတယ်။ အီဂျစ်နိုင်ငံ က ချမှတ် ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ကို လိုက်နာဖို့ အားလုံးက သဘောတူ ကြပါတယ်။ ဒါကို ဟားမားစ် ဘက် က ပယ်ချပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး ဂျွန်ကယ်ရီ က ဟားမားစ် အနေနဲ့
Posted: 22 Jul 2014 07:08 PM PDT
ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်အတွင်း မလေးရှားနိုင်ငံပိုင် ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကို ယူကရိန်းနိုင်ငံ အရှေ့ပိုင်းမှာ ပစ်ချခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ်မှာ ရုရှားနိုင်ငံက တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ အထောက်အထား သူတို့ထံမှာ မရှိဘူးလို့ အမေရိကန် ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတွေက ပြောဆိုပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့တန်တန် သင်တန်းတက်ထားတဲ့ ရုရှားလိုလားတဲ့ ခွဲထွက်ရေး သူပုန်တွေက မှားယွင်း ပစ်ခတ်ခဲ့ပုံ ရတယ်လို့လည်း ပြောဆိုပါတယ်။ ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်နေ့ကြ
Posted: 22 Jul 2014 07:06 PM PDT
Tel Aviv မြို့က အစ္စရေးလ် နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်ကို ပျံသန်းမယ့် အမေရိကန် လေကြောင်း လိုင်းတွေကို အဲဒီကို မသွားဖို့ အမေရိကန် လေကြောင်း ထိန်းသိမ်းရေး ဌာနက ၂၄ နာရီကြာ တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ ဂါဇာမှာရှိတဲ့ Hamas စစ်သွေးကြွတွေ ပစ်လိုက်တဲ့ ဒုံးကျည်တစင်း အဲဒီလေဆိပ်နားကို ကျပြီးတဲ့နောက် အဲဒီလို တားမြစ်လိုက်တာပါ။ ဒါ့အပြင် ဥရောပလေကြောင်း လိုင်းတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ လေယာဉ်ခရီးစဉ်တွေကို အမြန်ဆုံး ဖျက်သိမ်း လိုက်ကြပါတယ်။
Posted: 22 Jul 2014 05:40 PM PDT
ရေတာရှည် ဇူလိုင် ၂၂ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ရေတာရှည်မြို့နယ် ရေနီမြို့အရှေ့ဘက် စစ်တောင်းမြစ် တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ဇေယျသိမ် ကျေးရွာ အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ၌ ဇူလိုင် ၂၁ရက် နံနက်ပိုင်းက ဆရာမ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၁၀၀ ကျော် အစာအဆိပ်သင့်မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဇေယျသိမ်ကျေးရွာ အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ) တွင် ကျောင်းသားကျောင်းသူ ၂၂၈ ဦး ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပြီး ဇူလိုင် ၂၀ ရက်က စေတနာအလှူရှင်က ကြက်သားဟင်းဖြင့် အာဟာရ
Posted: 22 Jul 2014 04:50 PM PDT
သြစတြေးလျနိုင်ငံက ​တီထွင်ထားတဲ့ ​ကွန်ဒုံး ​ဟာ ​HIV ​ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ​သတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် ​လူအများအသုံးပြုနိုင်အောင် ​ရောင်းချဖို့သင့်မသင့် ​သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ အဲဒီ ​ကွန်ဒုံးဟာ ​HIV ​ဗိုင်းရပ်စ် ​ပိုးအပြင်၊ ​လိင်အင်္ဂါ ​တဝိုက်မှာ ​ဖြစ်တတ်တဲ့ ​ရေရုံတွေနဲ့ ​လိင်ဆက်ဆံမှုကနေ ​ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ​တခြား ​ရောဂါပိုး ​တွေကိုလည်း ​၉၉.၉ ​% ​အထိ ​သတ်ပစ်နိုင် ​စွမ်းရှိ ​တယ်လို့ ​ဆို ​ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးတွေ 